Rising Sun Pictures Education: Joannah Anderson Interview - NAB Show News by Broadcast Beat. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Ịmụta otú e si abụ ọkachamara.
Adelaide, South Australia- Rising Sun Pictures Education na-arụ ọrụ dị ka ihe nkwụsị ụkwụ nke ọtụtụ ndị na-eto eto na-eji eme ihe si na klas ahụ gaa ụlọ ọrụ. Joannah Anderson bụ otu. Ebe ọ bụ na ọ rụzuru nke ọma na RSP / UniSA 12-week Graduate Certificate Program in Dynamic Effects and Lighting na mbido afọ a, Joannah abanyela ọrụ mbụ ya dịka Junior 3D Lighting Artist na Technicolor ọhụrụ Ụlọ ọrụ Nkiri Film na Adelaide. Onye ahịa, Victoria ga-etinyezi nkà ndị ọ mụtara na 3D usoro mmepụta ahụ iji mee ihe n'ụzọ dị irè na usoro ihe nkiri a ga-ahọrọ maka nkiri sinima gburugburu ụwa.
Joannah kwuru okwu na RSP banyere ahụmahụ ya na RSP, ọrụ ọhụrụ na ọdịnihu ya.
RSP: Ebee ka ị buru ụzọ mụọ ihe ndị na-ahụ anya?
Joannah Anderson: Na AIE (Academy of Interactive Entertainment) na Adelaide. M bụ 18 ma chọọ ịmụta banyere mmegharị ahụ kama obodo m, Sale, enyeghị ihe ọ bụla. Dịka o mere, ndị mụrụ m na-eme atụmatụ ịkwaga Adelaide na AIE ka meghere n'oge ahụ, n'ihi ya, m kwagara ha.
RSP: Gịnị ka ị mụtara?
JA: Ihe ngosi 3D na ihe ngosi. Amalitere m n'egwuregwu egwuregwu ahụ, ma emesị mechaa gaa na fim ma nweta Ntụle Di elu na ihuenyo na Media.
RSP: Gịnị dugara gị na RSP?
JA: AIE nwere oghere, otu n'ime ndị ọkà okwu si na Foto Rising Sun. Echere m na ọ bụrụ na anaghị enye m ọrụ na-aga n'ihu n'ụlọ akwụkwọ, m ga-enwetakwu ahụmahụ na RSP.
RSP: Kedu ka ị si chọta usoro ahụ?
JA: Ọ bụ ihe na-akpali akpali. Ị na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ma na-amụta site na ndị ọkachamara, na ị nwere ike iso ha na oge ọ bụla. Enwere m mmetụta maka otu nnukwu studio na-arụ ọrụ, otú ndị mmadụ si emekọrịta. Usoro ahụ n'onwe ya bụ akwụkwọ mmemme nke gụsịrị akwụkwọ na Dynamic Effects and Lighting. Anyị na-eji Houdini eme ihe. Ọ bụ oge mbụ m jiri ngwanrọ ahụ.
RSP: Ọ na-esiri gị ike ibili ngwa ngwa?
JA: Ntakịrị ihe. Ụfọdụ n'ime ụmụ klas m nwere mmekọrịta na Houdini, n'ihi ya enwere m ụfọdụ ịchọta ime. Ma ha nile nyeere m aka. Echiche ahụ dị iche na ngwanrọ m na-ejibu, ma ozugbo m nwetara obi ike, ọ dị mfe.
RSP: Ndi afo ama ama ọfọn?
JA: Oo, m hụrụ ya n'anya! Ọ dị ịtụnanya.
RSP: Ndi otu n'ime ndị nkụzi gị nwere mmetụta dị gị n'ahụ?
JA: Ee. Greg na Sam, ndị nkụzi anyị na-enwu ọkụ, gbanwere echiche m dum banyere ọkụ. Mgbe m sonyeere ya, echere m na agaghị m enwe mmasị na ọkụ. Achọrọ m ịbanye na VFX, ma ọkara n'etiti ebe ahụ. Greg gosipụtara na anyị ka si Monsters, Inc. ma kọwaa nkọwa ndị na-egbuke egbuke, otu ị nwere ike isi jiri ọkụ na-ahọrọ ụfọdụ agba. Ọ dị nnọọ obi ụtọ banyere ya, nke ahụ gwakwara m. Amụtara m na ị nwere ike ịkọ akụkọ na ọkụ, ma ọ bụ mee ka anya ndị na-ege ntị gaa na mpaghara ụfọdụ nke fim ahụ. Ọ kụziiri anyị otú e si eme ka ìhè ghọọ nkà.
RSP: Kedu ka nkà gị si gbanwee oge izu 12 ahụ?
JA: Ha dị mma nke ukwuu, ngwa ngwa. Mgbe m tinye aka na RSP, echeghị m na m ga-anakwere. Ka ọ na-erule mgbe m gụsịrị akwụkwọ ahụ, enwere m ihe nkiri na-egbuke egbuke nke m hụrụ n'anya. M zigara Technicolor obi ike na enwere m ohere ịbanye n'ọrụ. Enwere m mmetụta nke ọma banyere onwe m mgbe m kwusiri ike.
RSP: E wezụga ịzụ ọzụzụ, gịnị ka ị mụtara banyere ịghọ ọkachamara ọkachamara?
JA: Anyi gara n 'abali na-abata ebe anyi gosiputara n'oru ndi okachamara n'ulo oru anyi ndi gwara anyi banyere oru ha. Anyị na-enwekwa ọtụtụ nnọkọ na ndị na-amụrụ ọrụ bụ ndị nyere anyị ndụmọdụ banyere itinye n'ọrụ, otu esi eduzi onwe anyị mgbe anyị na-agba ajụjụ ọnụ, na ndị ọrụ na-achọ ihe ngosi. Nke a nyeere m aka n'ọtụtụ ajụjụ ọnụ m.
RSP: Ihe omume a ọ na-atụ anya gị?
JA: Ọ gafere ha. Na mbụ, echere m na ọ ga-esi ike karịa, na agaghị m aghọta ihe ọ bụla. Ma nke ahụ mere ka ọ ghara ịbụ eziokwu. Ihe niile ị ga - eme bụ ịrara onwe gị nye ma rụọ ọrụ siri ike. N'ọnwa atọ, Rising Sun Pictures kụziiri m otú m ga-esi bụrụ ọkachamara.
RSP: Kedu ka ị si rute ọrụ gị na The Mill?
JA: Enwere m nwanne nna m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ ma gwa m na Technicolor na-abịa Adelaide. Etinyere m akwụkwọ na mpi. Izu abụọ ka e mesịrị, ha kpọrọ m ka m bịa maka mkparịta ụka. Izu abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, e nyere m ọrụ.
RSP: Ihe oke egwu. Ekele!
JA: Daalụ. Ọ bụ ezigbo ọzụzụ na ezi oge.
RSP: Kedu ihe ọrụ gị gụnyere?
JA: Ana m azụ ugbu a na ngalaba ọkụ. Anyị amalitebeghị mmepụta. Ha na-eji katana. Ya mere, m na-amụta usoro mmemme ọhụrụ. Ma ọ dị mma. Ọ dị nnọọ ka Houdini.
RSP: N'ikpeazụ, ị ga-arụ ọrụ na ntụrụndụ?
JA: Ihe nkiri kachasị. Achọrọ m ịrụ ọrụ na fim ebe ọ bụ na m bụ nwata. Ọ bụ ihe ijuanya na m ga-arụ ọrụ na fim na ọrụ mbụ m.
RSP: Ebee ka ị na-atụ anya ịga ebe a?
JA: Ọ ga-amasị m ịga Vancouver ma ọ bụ London. Enwere m nrọ nke otu ụbọchị meghere m studio. Ma nke ahụ bụ mgbe m na-eme nke nta nke netwọk na-amata ndị mmadụ.
RSP: Ndụmọdụ dị aṅaa ka ị nwere maka ndị ọzọ na-egwu egwu?
JA: Nwee usoro. Ejila onwe gị ike. Anyị nile ga-amalite ebe. Ọ na-ewe ọtụtụ awa ịghọ ọkachamara ọrụ. Gbalịsie ike ma tinye nkwupụta siri ike nke gosipụtara onye ị bụ dịka onye. Nwee obi ike n'ọrụ gị, ị ga-enweta ya. Ọ bụrụ na ị gwara m afọ gara aga na m ga-arụ ọrụ dịka onye na-egbuke egbuke, m ga-achị ọchị. Ma lee m.
About esiwanye Sun Pictures:
Na-esiwanye Sun Pictures (RSP) anyị na ike inspirational visual mmetụta maka isi nka n'ụwa nile. Ịmepụta pụtara ìhè oyiyi bụ isi nke ndụ anyị. Na obi anyị nkà otu, e nwere a iche iche ihe ọmụma na nkà-set, na-enyere a collaborative isi ebe anyị nwere ike na-arụ ọrụ ọnụ na-edozi nsogbu ma napụta oké visuals na anyị ahịa. Anyị enweta ụfọdụ ịtụnanya n'ezie visual mmetụta ọrụ site n'inye otutu ngwọta nyochawa ihe ịma aka na-arụ ọrụ. Anyị nwere ike na talent ọdọ mmiri n'ọtụtụ ona mkpa nke anyị ahịa.
Ihe omuma ihe omumu anyi bu ihe gbasara oru 120 tinyere Tomb Raider, Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-Men: Apocalypse, Season of Throches Season 6, The Legend of Tarzan, God of Egypt, Pan, X-Men: Days of Future Ogologo oge gara aga, Ụkọ egwuregwu na-agụ agụụ, akwụkwọ Harry Potter, Nnukwu ike, Wolverine, Prometheus na Great Gatsby.
Education Ụgha & Akụrụ visual mmetụta	2018-11-08
Previous: Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Osote: Bannister Lake na-ekwupụta mmekọrịta ya na Ụzọ Ntugharị Ejiji Ziri Ezi
Hey Buddy !, Achọtara m ozi a maka gị: "Rising Sun Pictures Education: Joannah Anderson Interview". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/rising-sun-pictures-education-joannah-anderson-interview/. Daalụ.